ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်စလင်များအား မမှန်သတင်း ဖော်ပြမူတိုးပွားလာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “Virtual genocide of Muslim Professionals” by the successive Military Governments
ကမ္ဘာ သြဇာရှိ အစ္စလာမ့် တက္ကသိုလ် အလ်အဇ်ဟရ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များအရေး ပြောပြီ »
ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်စလင်များအား မမှန်သတင်း ဖော်ပြမူတိုးပွားလာ
Source: ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်စလင်များအား မမှန်သတင်း ဖော်ပြမူတိုးပွားလာ
၂၅.၇.၂၀၁၂ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ – ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခအပြီး ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်စလင်များနှင့် ပတ်သက်သည့်မမှန်သတင်း ဖော်ပြမှု၊ ပျံ့နှံ့မှုများ မြန်မာမီဒီယာများတွင် တိုးပွားလာလျက် ရှိကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ကွဲလွဲနေသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါ သတင်းမှားများ ပျံ့နှံ့ရခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်နေကြောင်း မမှန်သတင်း ဖော်ပြသည့် သတင်းဌာနများ ကိုးကားသည့် သတင်းရင်းမြစ် ဖော်ပြချက်များအရ
များမကြာမီ ရက်များအတွင်းက ဘင်္ဂလီ(ရိုဟင်ဂျာ)များ ဗလီဝတ်ပြုမှုအပြီးတွင် ရခိုင်ရွာများဘက်သို့ ချီတက်လာနေသဖြင့် လုံထိန်းများက သေနတ်ပစ်ဖောက် ဟန့်တားခဲ့ရကြောင်း ….
ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ်နှင့် ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးတို့၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ The Voice Weekly ၏ အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“တကယ်တန်းဆိုရင် ဗလီတွေ အဖျက်ခံထားရလို့ ကျန်နေတဲ့ ဗလီမှာ စုပေါင်းပြီး ၀တ်ပြုရတာပါ။ အပြန်မှာ လည်း ပုံမှန်ပဲ။ ဒါကို သတင်းချဲ့ကားပြီး ကောလဟလ ပြန့်ပြီး ဒီလိုမျိုး ဖော်ပြတာပါ”ဟု အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့သူ ဒေသခံတစ်ဦးက myanmarmuslim.netသို့ပြောကြားသည်။
အထက်ပါဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့သည် သောကြာနေ့ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ စုပေါင်း ၀တ်ပြုမှု အများဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခအတွင်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ များ၏ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် အမြောက်အမြား ပျက်ဆီးခဲ့ရသဖြင့် ကျန်ရှိနေသည့် ဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော် အချို့တွင် စုပေါင်းဝတ်ပြုကြရာမှ အထက်ပါအတိုင်း မမှန်သတင်း ဖော်ပြခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာမွတ်စလင်တို့သည် အကြမ်းဖက်မှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာတို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် မြန်မာမွတ်စလင်တို့၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ကမ္ဘာက သိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း တူရကီအခြေစိုက် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ပံ့ရေးဖောင်ဒေးရှင်း (ÝHH)၏ပြောကြားချက်ကို pakobserver.net တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာရှင်နေ၀င်း လက်ထက်မှသည် ယနေ့အချိန်အထိ ဗလီအသစ် တည်ဆောက်ခွင့် လုံးဝမပေးခဲ့ဘဲ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်လျက်ရှိ သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖိအားပေး တောင်းဆိုလာလျှင် မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ် များမှ အစိုးရသြဇာခံ အချို့ကို
ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိကြောင်း အမည်ခံဆောင်းပါးများ ရေးသားစေလျက် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ရသည့် ဗလီအချို့အား ပြန်လည် ပြင်ဆင်သည့် ခုနှစ်ကို နဖူးစီးတွင် တပ်စေလျက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ အသစ်တည်ဆောက်ခွင့် ရသကဲ့သို့ ပုံမှားရိုက်လျက် နိုင်ငံတကာသို့ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
This entry was posted on July 26, 2012 at 12:24 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.